မာဒါဂက်စကာ, အာဖရိကတိုက်၏အရှေ့ဘက်မှလှပသောကျွန်းတစ်ကျွန်း | Absolut ခရီးသွား
မာဒါဂက်စကာသည်ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ နှင့်၏အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကိုချွတ် အာဖရိကတိုက်။ ပထမဆုံးပေါ်တူဂီကိုလိုနီခေတ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ပြင်သစ်တို့ဖြင့်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၆၀ တွင်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားမိသောအခါစိမ်းလန်းစိုပြေသောသဘာဝရှိသည့်ကျွန်းတစ်ကျွန်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။ baobab သစ်တောများ နှင့်ဖော်ရွေများကလူနေထူထပ် လွမ်.
၎င်းတွင်ဤအရာများစွာရှိသည်။ သို့သော်မဒါဂက်စကာသည်မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်းသစ်တောပြုန်းတီးမှုခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော်၎င်း၏ကြီးမားသောဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် သဘာဝပန်းခြံများ တရားဝင်တစ်လမ်းတည်းဖြင့်သာကြည့်ရှုနိုင်သည့်အပျိုစင်နေရာများရှိသည်။ အဖိုးတန် ကမ်းခြေ နှင့်ဆူညံ မြို့ကြီးများ သင်တို့အဘို့အ Madagascar ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖြည့်စွက်။ သင်သိလိုလျှင်ဆက်ဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1.1 Anja ၏ Reserve
1.2 Tsingy de Bemaraha အမျိုးသားဥယျာဉ်
1.3 Isalo အမျိုးသားဥယျာဉ်၊ မာဒါဂက်စကာတွင်နောက်ထပ်တွေ့ရမည့်အံ့။ စရာတစ်ခု
1.4 Andasibé-Mantadia အမျိုးသားဥယျာဉ်
1.7 Antananarivo, မက်ဒါဂက်စကာ၏မြို့တော်
စပိန်နိုင်ငံထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးသည်။ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်း၏အထင်ကြီးသောသဘာဝနှင့်ကမ်းရိုးတန်း၏လှပသောကမ်းခြေများအကြားခြားနားချက်မှာမာဒါဂက်စကာ၏ထူးခြားချက်များဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကသင့်ရဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်တွေအကြောင်း၊ ပြီးတော့မြို့ကြီးတွေအကြောင်းပြောပြခြင်းဖြင့်စတင်မည်။
Anja ၏ Reserve
ဟက်တာ ၄ fourကခန့်ရှိသောဤအရံသည်မာလဂက်စီဒေသခံတို့၏အစပျိုးမှု၏ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ရေရှည်။ သူတို့ကများသောအားဖြင့် lemur လူ ဦး ရေကိုကယ်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်၏သင်္ကေတများလေးရာခန့်ရှိသောကြောင့် Anja ၏အရံသည်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
Tsingy de Bemaraha အမျိုးသားဥယျာဉ်
တည်နေရာ Melaki ဒေသ မာဒါဂက်စကာမှ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်။ အဆိုပါ မင်းကွန်း ၄ င်းတို့သည်ကုန်းပြင်မြင့်များဖြစ်ပြီးမြေအောက်ရေများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောဥမင်များနှင့်တွင်းများရှိသည်။
ထို့ကြောင့်ဤပန်းခြံသို့သင်အလည်အပတ်သွားခြင်းသည်သင့်အားကမ္ဘာတွင်ထူးခြားသောကျောက်ဆောင်များ၊ မင်းဒါကိုဖြတ်သန်းနိုင်တယ် ferrata ကနေတဆင့် ၎င်းမှာအလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်အပိုင်းများအပြင်ဆွဲထားသည့်ပလက်ဖောင်းများရှိနေခြင်းကြောင့်အခက်အခဲအချို့ရှိနေသည်။
Tsingy de Bemahara သဘာဝဥယျာဉ်
သင်တို့သည်လည်းတစ် ဦး ခရီးစဉ်ယူနိုင်ပါတယ် Tsiribihina မြစ် ထူးခြားတဲ့ရိုးရာလှေ၌တည်၏။ သင်က၎င်းကိုတိုင်းပြည်၏မြို့တော်၊ အန္တာနာနီရီဗိုတွင်သာမကမြို့တော်မှာလည်းငှားရမ်းနိုင်ပါတယ် myandrivazo, ခရီးစတင်ဘယ်မှာ။
Isalo အမျိုးသားဥယျာဉ်၊ မာဒါဂက်စကာတွင်နောက်ထပ်တွေ့ရမည့်အံ့။ စရာတစ်ခု
သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါလျှင် ကော်လိုရာဒို၏ရန်း Canyon အ, သင်သည်ဤပန်းခြံ၌တွေ့လိမ့်မည်အရာကို၏စိတ်ကူးတစ်ခုရနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ၎င်းမှအနီရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်မရရှိနိုင်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်အစုလိုက်အပင်မျိုးစိတ်နှင့်, သင်တန်း၏, lemurs နှင့်အတူကြီးမားသောချောက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
သင်တစ်ယောက်တည်းလည်ပတ်ရန်သင် (သင်အကြံပေးမည်မဟုတ်) ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်တစ် ဦး ငှားရမ်းရန်ရှိသည် ဒေသခံလမ်းညွှန် အနီးအနားရှိမြို့၌တည်၏ ရာနိုဟီရာ။ ပန်းခြံ၏ခရီးစဉ်သည်နာရီအနည်းငယ်မှရက်ပေါင်းများစွာကြာရှည်နိုင်သည်။
၎င်းသည် Antananarivo နှင့်အလွန်နီးသောကြောင့် Malagasy လူမျိုးများမကြာခဏလည်ပတ်သည်။ ၎င်းတွင်ဟက်တာ ၁၅၀၀၀ နီးပါးရှိသည် စိုစွတ်သောသစ်တော နှင့်ကြီးမားသောပန်းကြွယ်ဝသော။ သို့သော်၎င်း၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုမှာထိုတွင်သင်သည် lemur အကြီးဆုံးမျိုးစိတ်ကိုတွေ့နိုင်သည် indri-indri ဖြစ်သည်အမြင့်ခုနစ်ဆယ်စင်တီမီတာနှင့်အလေးချိန် ၁၀ ကီလိုဂရမ်အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။
ပန်းခြံများ၌မိမိကိုယ်ကိုမချဲ့ထွင်ရန်နှင့်မာဒါဂက်စကာသို့သင်၏လည်ပတ်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်းပေါ်တွင်သင်မြင်နိုင်သည့်အခြားသဘာဝနေရာများကိုအနှစ်ချုပ်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ၊ Andringitra အမျိုးသားဥယျာဉ်, တောင်တက်ဘို့ပြီးပြည့်စုံသော၎င်း၏ကျောက်တောင်များနှင့်အတူ Ranomafana နှင့်အတူတအရာအတွက်တစ် ဦး တည်းသာ ရွှေဝါး, lemur ၏အခြားမျိုးစိတ်။
သင်သိသည့်အတိုင်းအာဖရိကနိုင်ငံသည်ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းတွင်သင်သွားရောက်လည်ပတ်ရမည့်သေးငယ်သည့်ကျွန်းများလည်းရှိသည်။ ဒါဟာအမှုဖြစ်ပါတယ် ဆာကာတီယာ, မစ်စီယို o တနင်္လာနေ့, ဒါပေမယ့်နှစ်ခုအရေးအပါဆုံးနှင့်ခရီးသွား two ည့် Nosy Be နှင့် Sainte Marie ဖြစ်ကြသည်။
နှာခေါင်းကြီးသော Be လှပသောရေကန်များပေါ်ပေါက်လာသည့်မီးတောင်ခဲများမြောက်မြားစွာရှိသောကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုအများကြီးကသိမ်းပိုက်သည် Lokobe သဘာဝဘေးမဲ့တော ကမ္ဘာပေါ်ရှိအသေးငယ်ဆုံးဖားတစ်ကောင်နေထိုင်သော Chameleons မျိုးစိတ်များ Stumpffia Pigmaea ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုထက်ကားဤကျွန်းသည်မာဒါဂက်စကာတွင်ခရီးသွား most ည့်သည်များအတွက်အရေးပါဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် ခမ်းနားကမ်းခြေ.
ဤအတောအတွင်း သန့်ရှင်းသူအမာရီ လှပသောသဲဒေသများနှင့်တောင်တက်လမ်းကြောင်းများလည်းရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့အရေးအပါဆုံးမြို့မှာဖြစ်တယ်။ Ambodifotatraက Santa Maria ၏ဘုရားကျောင်း၁၈၅၇ ခုနှစ်မှစတင်ကာ Madagascar တွင်ပထမဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မက်ဒါဂက်စကာ၏သဘာဝနိမိတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ခရီးဆက်ပြီးနောက်၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကမြို့ကြီးများကိုယခုကျွန်ုပ်တို့သိသွားပြီဖြစ်သည်။ Antananarivo သည်မြို့တော်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံ၏အလယ်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းကိုကြည့်ရှုရန်၎င်းတွင်အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများရှိသောကြောင့်လမ်းပြတစ် ဦး နှင့်အတူသွားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
အထဲတွင်သင်မြင်နိုင်ပါသည် ဘုရင်မရိုဗာနန်းတော်တစ် ဦး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဖြစ်သော။ အဟောင်းသည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်မီးလောင်ကျွမ်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းကိုသိရန်သင်ဝတ်ဆင်ထားခြင်းသည်ထိုက်တန်သည် Imerina ၏နိုငျငံတျော သို့မဟုတ်, ကိုလိုနီမတိုင်မီကမာဒါဂက်စကာမှအခြားလမ်းထားပါ။
သင်တို့သည်လည်းတွေ့နိုင်ပါသည် Andafiavaratra နန်းတော်, တစ် ဦး Baroque ဆောက်လုပ်ရေးယနေ့ပြောင်းလဲခဲ့သည် သမိုင်းဝင်ပြတိုက်။ အဆောက်အ ဦး နှစ်ခုလုံးသည် Antananarivo ၏အခြားနေရာတွင်တည်ရှိပြီးအခြားထူးခြားသည့်အိမ်များပေါများသည်။
ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဘို့, လွတ်လပ်ရေးရိပ်သာလမ်း ၎င်းသည်မြို့၏အဓိကလမ်းဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်မြောက်မြားစွာတွေ့လိမ့်မည် ကိုလိုနီစတိုင်အိမ်များ။ ဒါဟာတော်တော်လေးမှစတင်သည် Soroano ဘူတာရုံ ပြီးတော့မင်းကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ် သမ္မတနန်းတော်.
ပိုပြီးပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ် စျေးကွက်ဒေသခံများ၏နေ့စဉ်ဘဝကိုစုပ်ယူပြီးအစားအစာမှလက်မှုပညာအထိကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်သည် Antananarivo အတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, 1873 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည် Anasoy ရေကန်, အတုနှင့်အဘယ်သူ၏အလယ်ပိုင်း islet ၌သင်တို့ကိုစစ်အတွက်သေဆုံးသွားသူတွေကိုတစ် ဦး အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး မြင်လိမ့်မည်။ ဤကန်သည်အထူးသဖြင့်မလုံခြုံသောနေရာတွင်ရှိသည် စောင့်ရှောက်မှု.
ခေါ်ပါ Diego Suarez မကြာသေးမီကတိုင်းပြည်၏မြောက်ဘက်စွန်းရှိဤမြို့သည်၎င်း၏အဓိကဆိပ်ကမ်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤမြို့မှတစ်ခုသည်အထူးသဖြင့်ပေါ်ထွက်လာသည့်အံ့မခန်းဖွယ်ပင်လယ်အော်တွင်တည်ရှိသည် သကြားပေါင်မုန့်, ကျွန်းတစ်ကျွန်း၏တောင်နှင့်ဆင်တူဘို့အမည်ရှိကျွန်းတစ်ကျွန်း Rio de Janeiro မြို့။ ထို့အပြင် Antsiranana သည်၎င်း၏ရိုးရာအမွေအနှစ်များနှင့်နာမည်ကြီးသည့်ထင်ရှားကျော်ကြားမှုတစ်ခုဖြစ်သည် ပြင်သစ်ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အ ဦး များ.
လူ ဦး ရေနှစ်သိန်းခန့်နေထိုင်ရာနိုင်ငံ၏အဓိကဆိပ်ကမ်းဖြစ်သည်။ သူသည်နန်းစံစဉ်ကကြီးပြင်းလာသူဖြစ်သည် Radama ငါ၁၉ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်သူရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောကျွန်များအတွက်မြို့ကိုထွက်ခွာရန်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လူ ဦး ရေထူထပ်သောလမ်းစျေးကွက်များအပြင်၊ Bazary ဖြစ်ပါစေသင့်အတွက်ကမ်းလှမ်းရန်များစွာမရှိပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကမ်းခြေတွေကလှတယ်၊ ဒါပေမဲ့အများစုမှာညစ်ညမ်းမှုနဲ့ငါးမန်းတွေကြောင့်ရေကူးတာကိုတားမြစ်ထားလို့ပဲ။
ဒီမြို့ငယ်လေးကိုသွားဖို့သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည်။ အဲဒီမှာသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် အံ့သြဖွယ်ကမ်းခြေ ကယောင်ဆောင်ခြင်းစသည့်အားကစားများကိုလေ့ကျင့်ရန်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကဒီဟာကအံ့ see စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းပါပဲ အဆိုပါ Baobabs ၏ရိပ်သာလမ်း။ ၎င်းသည်သစ်ပင်အမြောက်အမြားဖြင့်စီးနင်းနေသောရှည်လျားသောလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးသူတို့၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်အမြင့်ကိုပါသိလိုသည်။
အဆိုပါ Baobabs ၏ရိပ်သာလမ်း
အထူးအာရုံစိုက်ပါ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ baobab, ရောယှက်စိုက်ပျိုးကြပြီနှစ်ခုနမူနာ။ ဘယ်လိုသူတို့မဟုတ်ရင်သူတို့တစ်တွေလှပသောရှိသည်နိုင်ဘူး ဒေသခံဒဏ္legာရီ။ ဤအချက်က၎င်းတို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သူတို့၏ဘုရားများကိုအမြဲအတူတကွနေထိုင်ရန်တောင်းဆိုသောရွာငယ်များမှလူငယ်နှစ် ဦး ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်အာဖရိကနိုင်ငံသည်ရာသီဥတုအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်အအေးဆုံးလများသည်ဇူလိုင်လနှင့်သြဂုတ်လဖြစ်ပြီးအပူဆုံးရာသီဥတုမှာဇန်နဝါရီလ၊ ဖေဖော်ဝါရီနှင့်မတ်လတို့ဖြစ်သည်။ ယင်း၏ပထဝီအနေအထားသည်စပိန်နိုင်ငံထက်စာလျှင်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဖြန့်ဝေခြင်းကိုဆိုလိုသည်ကိုသတိရပါ။
သို့သော်ပူနွေးသောလများသည်မိုးရာသီနှင့်ဆိုင်ကလုန်းရာသီများနှင့်တိုက်ဆိုင်နေသဖြင့်သင်သည်ထိုရက်စွဲများကိုသွားရန်စိတ်မဝင်စားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်မှာသင်မာဒါဂက်စကာသို့လည်ပတ်ရန်ဖြစ်သည် မေလနှင့်အောက်တိုဘာလအကြား။ ဆောင်းရာသီဖြစ်သော်လည်းအပူချိန်သည်မိုးရွာသွန်းမှုနည်းပြီးသာယာသာယာသည်။
အာဖရိကကျွန်း၏ gastronomy တွင်အဓိကပါဝင်သောအရာပါဝင်သည်။ ဆန်။ နံနက်စာအပါအ ၀ င်တစ်နေ့တာလုံးတွင်တွေ့နိုင်သည်။ အလားတူစွာ၎င်းကိုအရာခပ်သိမ်းနီးပါးနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည် - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အသားများ၊ ငါးနှင့်အုန်းသီးကဲ့သို့သောသစ်သီးများပင်။
တိတိကျကျအာလူးချောင်းရောဂါ၏ပန်းကန်တန်းထူးကဲသည် zebu နှင့်အတူဆန်။ ကြက်သားများစွာကိုလည်းစားသော်လည်းဒီ bovid သည်မာဒါဂက်စကာတွင်အဓိကအသားဖြစ်သည်။ တကယ်တော့သူတို့ကသင့်ကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင် akoho s နှင့် voanio ဒါဟာကြက်သားနှင့်အုန်းသီးနှင့်အတူဆန်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင်လည်းပုံမှန်ဖြစ်သည် အုန်းဆော့စ်အတွက်ငါး။ အခြားတစ်ဖက်တွင် foza s ကိုနှင့် henakisoa ဒါဟာဝက်နှင့်အတူဝက်သားကြော်ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, amalone ထိုအရာသည်ဝက်သားနှင့်တူ၏။ ခန္ဓာကိုယ် ၎င်းသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည်ဖြစ်သည်; က ကဗျာ ၎င်းသည်ဇာတိသွေးသွေးကြောတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးဆန်၊ ပဲနှင့်အတူပါ ၀ င်သည် ravitoto ၎င်းကိုပီလောပီနံနှင့်ကြိတ်ထားပြီး zebu သို့မဟုတ်ဝက်သားအသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အချိုပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း။ mofo gasy နှင့် mokari ၎င်းသည်ဆန် pancake တစ်မျိုးဖြစ်သည် ကိုဘာ ၎င်းတွင်ဆန်မှုန့်၊ ပျားရည်၊ မြေပဲ၊ နောက်ဆုံးတော့မင်းမှာပုံမှန်သောက်စရာနှစ်မျိုးရှိတယ်။ Ranon'ampago ၎င်းကိုချက်ပြုတ်သောအခါအိုးများကပ်ထားသောဆန်နှင့်ပြုလုပ်ထားသည် rhum စီစဉ်သည် ဒါဟာ vanilla နှင့်ပျားရည်ရှိသည်သောကျွန်း၏ရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်၏အဓိကလေဆိပ်ဖြစ်သည် Antananarivo ဒါပေမယ့်လည်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ် နှာခေါင်းကြီးသော Be။ ထိုအခါကဲ့သို့သောမြို့ကြီးများရှိအခြားလေယာဉ်ကွင်းရှိပါတယ် Toamasinaသို့သော်၎င်းတွင်အတွင်းရေးလေကြောင်းများသာရှိသည်။
မာဒါဂက်စကာကိုရောက်တာနဲ့ခရီးသွားရတာမလွယ်ဘူးဆိုတာသတိရသင့်တယ်။ လမ်းတွေကနည်းနေပြီးအခြေအနေမကောင်းဘူး။ ဤဖြစ်လင့်ကစားရှည်လျားသောခရီးများအတွက်ကျွန်းပေါ်ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထူးချွန်မှုကိုခေါ်သည် တက္ကစီ - brousse။ သင်ခရီးသည်များနှင့်အတူမျှဝေရမည့်ဗင်သို့မဟုတ်မီနီဘတ်စ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ လမ်းကြောင်းများသည်ရှည်လျားပြီးလေးလံသောကြောင့်စိတ်ချရသောမာလဂက်စီလူမျိုးများနှင့်သင်အချိန်ရလိမ့်မည်။
ရထားလမ်းလည်းရှိတယ်။ အသုံးအများဆုံးမှာဒါခေါ်ဖြစ်သည် တောတွင်းရထား, သောကုန်းမြင့်ကနေကမ်းရိုးတန်းမှခရီးစေသည်။ ကီလိုမီတာနှစ်ရာမပြည့်သောခရီးတွင်ခုနစ်နာရီကျော်ကြာသောခရီးကိုအဆင်မပြေသောယာဉ်တန်းဖြင့်ပြုလုပ်ပေးသည်။ သို့သျောလညျး, အတှေ့အကွုံဇာတိလူ ဦး ရေနှင့်အဆက်အသွယ်နှင့်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်မမေ့နိုင်သောဖြစ်ပါတယ် အံ့သြဖွယ်ရာအမြင်များ ဘာကိုကမ်းလှမ်းပါသလဲ
နောက်ဆုံးတော့မြို့ကြီးတွေမှာပြောင်းရွှေ့ဖို့မင်းမှာမင်းရှိတယ် pousse, ကျော်ကြားဆင်တူသော အချစ်ရယ် အိန္ဒိယနှင့်အခြားအာရှနိုင်ငံများမှ။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ မမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံကို။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများကိုသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထူးခြားသောအချို့၊ လူ ဦး ရေထူထပ်သောမြို့ကြီးများကိုသင်သိလိမ့်မည်၊ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ယူရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည် သင့်ရဲ့လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ဘာလို့လဲဆိုတော့အာဖရိကကျွန်းဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုမရှိသလိုမဖြစ်ဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ဒါဂတ်စကာ